Alternative maka Spotify adịchaghị koodu
1. Spotify adịchaghị koodu
2. Na-ege ntị Spotify music free enweghị Spotify adịchaghị koodu site TunesGo
3. Olee otú ịkọrọ music ka mobile / iPhone site TunesGo
Nkebi nke 1: Spotify adịchaghị koodu
Spotify adịchaghị bụ ihe magburu onwe ngwa, nke na-enye ohere na-egwu gị ahaziri listi ọkpụkpọ offline. Ọ bụ nke zuru okè ngwa maka nzube ebe ị na-ejegharị ejegharị na-adịghị ohere ka internet. N'ihi ya na ọtụtụ uru metụtara na Spotify adịchaghị, naanị ihe nke na-aga n'ime ọjọọ bụ ego abuana ke ịzụ ihe adịchaghị ọrụ. Otú ọ dị, na Spotify adịchaghị koodu, ị nwere ike tufuo ihe chọrọ na-akwụ ego inweta ihe kasị mma ọrụ ke music ụwa na inweta niile uru nke adịchaghị.
Esi Spotify adịchaghị koodu
E nwere ọtụtụ ụzọ na-Spotify adịchaghị koodu. Ọtụtụ weebụsaịtị na-mara na-enye Spotify adịchaghị koodu, nke na-ekwe ka ndị ọrụ na-tufuo ihe a chọrọ na-akwụ ụgwọ ma ka na-availing na-ejere ndị adịchaghị ọrụ nke Spotify. E nwere ọtụtụ nrụọrụ àjà Spotify adịchaghị Usoro na na enyemaka nke ọtụtụ Spotify adịchaghị Usoro generators, na ohere ka Spotify adịchaghị Usoro nwere ike ime. Ma, ka ịbụ eziokwu nke ndị Spotify adịchaghị Usoro generators-apụghị irè. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ezi nyiwe na-ezi Spotify adịchaghị Usoro, nke nwere ike na-akwa ojiji.
The ụzọ na-Spotify adịchaghị koodu agụnye nkwado ịzụrụ ma ọ bụ otu oge Trial Period. Ọzọ usoro nwere ike depụtara na ụdị Spotify adịchaghị koodu generator. Mgbe, pụta usoro nwere ike depụtara na ụdị nke ọtụtụ weebụsaịtị nke na-enye Spotify adịchaghị koodu maka free. Site nanị na ịga na weebụsaịtị na-emecha ụfọdụ nke nzọụkwụ n'ụdị ị na-ahọrọ na ndenye aha ụdị na ndị ọzọ na ndị dị otú ahụ, i nwere ike inwe Spotify adịchaghị koodu.
Nkebi nke 2: Gee Spotify music free enweghị Spotify adịchaghị koodu
The Spotify adịchaghị enye ọtụtụ uru ka ọrụ na na ojiji nke adịchaghị, ị nwere ike mfe tufuo nke mgbasa ozi na ọbụna nwere nhọrọ ka mma ụda àgwà. Na nhọrọ nke na-akpakọba ruo 3000 songs n'ihi nzube nke na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị songs, na Spotify adịchaghị awade ọtụtụ uru, nke ndị na-eji Spotify onwe apụghị isi.
Na-ege ntị Spotify music free na TunesGo
TunesGo bụ oké ngwá ọrụ maka nzube nke Spotify music. Ọ na-enye ohere Azọpụta nke Spotify music na MP3 format mgbe ndekọ na awade ọtụtụ atụmatụ pụtara n'ihi na nzube nke Spotify Music.
otú ibudata / ndekọ Spotify music site TunesGo
Site n'iji Wondershare TunesGo, ị nwere ike ibudata ma ọ bụ dekọọ Spotify music. E nwere ụfọdụ ngwaọrụ dị na ahịa, nke nwere ike mfe ekwe ka ị download music si Spotify na-ege ntị ha na-anọghị n'ịntanetị. Na mfe iji na mfe ngwa n'ụdị Wondershare TunesGo, ị nwere ihe kasị mma nhọrọ n'ihu gị na otu nzube. N'ihi nzube nke na-eji TunesGo, niile ị chọrọ bụ ibudata ya site ya ukara website na n'otu oge download Spotify. N'ihi na nke a download nzube, i kwesịrị pịa Spotify nhọrọ dị na TunesGo.
Ugbu a, nanị pịa bọtịnụ sị teepu na isi menu nke TunesGo. Mgbe ahụ mkpa ka ị họrọ otu Spotify akụ maka na ndekọ na-egwu ya.
Ka anya dị ka ị ga-pịa ya, ị ga-akpaghị aka na-ahụ na TunesGo malitere ya arụ ọrụ ma na malitere idekọ họọrọ na-akụ.
Akpaghị aka, ị ga-enweta ihe MP3 faịlụ na ya n'ọbá akwụkwọ ka anya dị ka ndekọ usoro a mere. The Complete usoro nwere ike na-nkeji na kacha.
The ndekọ nke Spotify Music nwere ike mere na-esonụ otú
Ẹkedori TunesGo. Mgbe launching TunesGo, gaa na 'achọpụta' ngalaba na họrọ 'teepu' nhọrọ.
Pịa Red rec (ndekọ) bọtịnụ. Na-edekọ ihe ga-amalite na-egosi ma na-amalite mgbe 00:00:00.
Mgbe ahụ Mwepụta Spotify na-egwu song ị chọrọ ka ịdekọ.
TunesGo ga-amalite Ndekọ abụ.
Olee otú ịkọrọ music ka mobile / iPhone site TunesGo
The nkekọrịta nke Music ka Mobile ma ọ bụ iPhone Via TunesGo nwere ike ga-agwụ agwụ na ukwuu ala. Na-alụbeghị di click, ị nwere ike ezi mfe nyefee music ka iTunes na enyemaka nke TunesGo. N'ihi na ndị mmadụ na-eji Windows dị ka sistemụ arụmọrụ, nanị ịhọrọ Spotify music na ị chọrọ nyefee iTunes. Mgbe ahụ ntị kwupụta na ala nke Library window, na pịa bọtịnụ nke atụmatụ 'Tinye ka iTunes'. Ka anya dị ka ị na-eme, ị nwere ike ugbu a na-ahụ gị họrọ Musics na TunesGo playlist on iTunes.
E nwere nnọọ ụzọ ọzọ maka otu nzube. Ị nwere ike nri-pịa kwuru selections wee pịa 'Tinye ka iTunes Library' ị ga-ahụ ya mezue otu ọrụ dị ka tupu.
N'ihi nzube nke exporting dere music ka iPhone ma ọ bụ ihe ọ bụla ekwentị mkpanaaka na site Tunesgo, ị pụrụ ịgbaso nyere n'okpuru nzọụkwụ.
Jikọọ ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Right-pịa 'Kọrọ' ọkọnọ n'okpuru 'Library' wee họrọ 'Export ka' na họrọ ngwaọrụ. Iji nyefee otu song ma ọ bụ họrọ songs, dị nnọọ pịa checkbox tupu song aha. Mgbe ahụ Right-pịa Kọrọ n'okpuru Library na họrọ 'Export Iji' na họrọ ngwaọrụ ma ị na-eme na usoro.
> Resource> Spotify> Alternative maka Spotify adịchaghị Usoro